Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » War Deg Deg Ah » Siyaabaha Looga Xuso Sannad-guurada 150aad ee Beerta Qaranka ee Yellowstone
Saddex meelood oo laga soo galo, Montana waa goobta ugu habboon ee khibradda beerta
Waxay ku yaalliin Montana, Idaho iyo Wyoming, Beerta Qaranka ee Yellowstone - beerta qaran ee ugu horreysa adduunka - waxay u dabaaldegaysaa sannad-guuradii 150-aad ee sanadkan. Ka kooban 2.2 milyan acres, Montana waxay leedahay saddex ka mid ah shanta albaab ee laga soo galo beerta, oo ay ku jirto albaabka kaliya ee laga geli karo gaadiidka sanadka oo dhan ee loo maro Gardiner.
2021, Beerta Qaranka ee Yellowstone waxay soo dhawaysay 4.86 milyan oo soo booqde 2022 waxay isu qaabaynaysaa inuu noqdo sanad kale oo mashquul ah iyadoo booqdayaashu ay u dabaaldegayaan mid ka mid ah meelaha ugu khaaska ah aduunka. Iyo inta dadku ay si weyn u booqan doonaan beerta xagaagan, halkan waxaa ah siyaabaha ugu fiican ee aad ula kulmi karto dad badan.
Waqtiga saxda ah. Dhib ma leh markaad booqato xagaagan, fursadaha waa inaad heli doontaa dad badan haddii aad tagto maalinta. Waqti u qaado safarkaaga si aad u soo kacdo goor hore si aad u qabato uumiga kor u kacaya ee Grand Prismatic Spring, daawato Old Faithfulerupt ka dib marka qorraxdu dhacdo oo qoy khibradda cirka xiddiguhu ka buuxaan ama la kac qorraxda si aad u daawato fallaadhihiisu oo faafaya. Muuqaallada kala duwan ee Yellowstone
Ka bax Xaqiiqdu waxay tahay in inta badan booqdayaasha Beerta Qaranka ee Yellowstone ay ku dheggan yihiin waddooyinka. Haddii aad runtii rabto inaad ka fogaato dadka kale, waa inaad ku dhufo waddooyinka. Iyadoo 900 mayl oo waddooyin ah oo dhan beerta, waxaa jira fara badan oo laga dooran karo. Maskaxda ku hay in aad had iyo jeer la socoto saaxiibkaa, diyaargarow, qaado (oo aad taqaan sida loo isticmaalo) buufinta orso oo aad siisid duurjoogta meel ballaadhan.
La Soco Hage. Inta aad adigu iskaa u booqan karto beerta, mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee aad khibrad qoto dheer u yeelan karto waa in aad raacdo hage ama qalab-bixiye fuulista fardaha ama llama socodka. Waxa kale oo jira hagayaal khibrad leh oo bixiya hawlo ay ka mid yihiin boorsooyinka dhabarka, baaskiil wadida, kalluumaysiga iyo sawir qaadista, iyo sidoo kale safarro ku salaysan waddooyin.
Iyo halka Beerta Qaranka ee Yellowstone ay ahaan doonto meel liiska baaldi ku jirto, waxaa jira waxyaabo badan oo la arko oo la sameeyo oo ka baxsan xudduudaha beerta. Soo-booqdayaashu waxay si fudud u awoodaan inay ka baxaan mid ka mid ah saddexda albaab ee beerta laga soo galo ee Montana iyaga oo u socda tacaburrada kale, oo ay ku jiraan:
Wadista Waddada Beartooth Highway. La yaab leh laf ahaanteeda, Waddada Beartooth Highway waa Wadiiqo muuqaal dabiici ah oo heer qaran ah oo dhexmarta Montana iyo Wyoming labadaba waxaana lagu heli karaa iyada oo laga baxo albaabka Yellowstone ee waqooyi-bari. Waddada 68-mile ah waxay ka bilaabataa Cooke City, Montana ilaa Red Lodge, Montana, waxayna siinaysaa rakaabkeeda aragtiyo daan-jabin ah iyo marin u helidda harooyinka sare ee alpine iyo waddooyinka Buuraha Beartooth.
Booqo Red Lodge. Waxaa hareereeyay buuraha Beartooth iyo Absaroka, Red Lodge waa mid ka mid ah magaalooyinka yaryar ee ugu quruxda badan Montana. Iyada oo leh magaalada hoose ee taariikhiga ah oo lagu socon karo, Red Lodge waa meel aad ku dhejiso liiska booqashada-ga ah. Sidoo kale waa barta bilawga madadaalada dibadda iyo tacaburrada, oo ay ku jiraan socodka, raacitaanka fardaha iyo safarrada webiyada.
Socodka Gardiner. Tallaabooyinka laga soo galo jardiinooyinka woqooyiga waa magaalada Gardiner. Guriga ay ku nool yihiin in ka yar 900 oo degane, xilliga xagaaga ayaa bulshadan albaabku ay boodayaan. Laga bilaabo Ogosto 23 - 28, waxaa jiri doona dhowr tilmaamood oo lagu soo bandhigi doono mashruuca tuulada tipi ee Roosevelt Arch ee taariikhiga ah. Waxa kale oo aad ka kalluumaysan kartaa, raft iyo sabeyn kartaa dhawr qalab oo maxalli ah oo ku yaal Gardiner, iyo sidoo kale waxaad ku qooqin kartaa ilo kulul oo u dhow Dooxada Paradise.
Ku Soco Taariikhda Montana Soo-booqdayaasha ku salaysan safarkooda galbeedka Yellowstone (ama ka baxa beerta ilaa laga soo galo galbeedka) waxay wax ka yar 90 daqiiqo u jiraan Virginia City iyo Nevada City, oo ah laba ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee la ilaaliyo ee dalka. Inta lagu jiro xilliga xagaaga (Maalinta Xusuusta - Sebtembar), booqdayaashu waxay qaadan karaan safarro taariikhi ah, ka fiiri dukaamada maxalliga ah iyo saloons, waxay ku hoyan karaan habeenkii guri taariikhi ah, digsi dahab ah ama u safri kara masraxa.
Wax badan ka baro Yellowstone
Beerta Qaranka iyo siyaabaha loogu dabaaldego sannad-guuradii 150-aad ee ka soo wareegtay BooqoMT.com.
Xog cusub oo ku saabsan neefta daran